युरोकप : कुन् स्ट्राइकरले गर्लान् सबैभन्दा धेरै गोल ? | Jukson
फुटबलमा गोल भएन भने त्यसको मजा पक्कै पनि कम हुन्छ । यस्तोमा यो पटकको युरोकपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्दै गोल्डेन बुट कुन् स्ट्राइकरले जित्ला ? यो प्रश्नले धेरैको दिमाग रिंग्याएको छ । यस मामिलामा इङ्ग्लिस टीम सबैभन्दा बलियो रहेको अनुमान गरिएको छ।
इङ्ल्यान्डसँग इङ्लिस प्रिमियर लिगमा गोल्डेन बुट जितिसकेका ह्यारी केन, उनीपछि धेरै गोल गर्ने जेमी भर्डे, वायन रूनी, ड्यानिएल स्टाइरेज र इङ्लिस प्रिमियर लिगमा सानै उमेरमा सनसनी मच्चाएका मार्कस रसफोर्ड जस्ता सशक्त स्ट्राइकर रहेका छन् ।
अर्कातिर आयोजक फ्रान्सँग एन्टोनी ग्रिजमन, एन्थनी मार्सल र ओलिभर जिराउड जस्ता प्रतिभाशाली स्ट्राइक रहेका छन्।
यसका अलाबा एक अर्का स्ट्राइकर छन्, जसमाथि धेरै फुटबल प्रेमीले नजर लगाएका छन्, उनी हुन् स्वीडेनका ज्लाटन इब्राहिमोविच.
यसका अलाबा बेल्जियमका रोमेलु लुकाकू, क्रिस्चियन बेन्टेक र पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि पनि करोडौं फुटबल प्रेमीको नजर परेको छ।
अर्कातिर दुई पटक यस प्रतियोगिताको गोल्डेन बुट जितेको स्पेनका कुनै खेलाडीले यो पटक पनि त्यो रेकर्ड राखे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । यी खेलाडी बाहेक अन्य नयाँ खेलाडीले पनि धेरै गोल गरेर गोल्डेन बुट जितेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
हिंसा मच्चाउने रुसी समर्थक फ्रान्सद्वारा देशनिकाला
व्यावहारिक ज्ञानमा आधारित शैक्षिक संस्थाको अभाव
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरले सात जना बोक्नु गल्ती थियो ?
गगन थापाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– ‘म निर्देशन दिन सक्दिन’
‘आधा लभ’मा ऋचा र अर्पणको प्रेम, हट रोजिशा